Abaalmarinta Geesinimada: lacag ku kasbato nidaamka abaalmarinta geesinimada | Laga soo bilaabo Linux
Adduunyada loo yaqaan 'cryptocurrencies' ma aha wax cusub laakiin waxay soo jiidatay fiiro gaar ah tan iyo markii ay caan baxday Bitcoin ay gaartay qiime aad u badan oo xannibaadda waxaa lagu dabaqay adeegsiyo cusub sida baayacmushtarka iyo uruurinta mahadnaqa NFT.
Si kastaba ha noqotee, sidaan dhahno, tani maahan wax cusub.
Muddo dheer ayaan haysannay barnaamijyo adeegsada xannibaadda sida qalab hawlgal ama dhiirigelin ku shaqeynta Software-ka Bilaashka ah. Ku saabsan tan dambe ayaa maskaxda ku haysa biraawsarka webka Brave ama Brave Browser. Brave waa biraawsar web adeegsanaya mashruuca Chromium ee bilaashka ah ee aasaaska u ah biraawsarka isla markaana leh ku daris iyo horumarin loogu talagalay isticmaalaha ugu dambeeya.
Mid ka mid ah horumaradaas waa adeegsiga iyo abaalmarinta calaamadda ama sida caadiga ah loogu yeero, BAT cryptocurrency.
Brave waxaa soo saaray Brendan Eich, oo ah aasaasaha Mozilla. Brendan Eich, oo ka daalay jihada cusub ee ay u socoto Mozilla Firefox iyo ku adkeysashada inteeda kale ee Mozilla Foundation inay hayaan mishiinkii hore ee Firefox oo aan la badalin, wuxuu go'aansaday inuu ka tago Mozilla oo uu abuuro geesinimo.
Geesinimadu kaliya ma ahan chromium laakiin waxay ku dartay shaqooyin waxtar u leh dadka isticmaala sida xayeysiiska xayeysiinta, isticmaalka hoose ee xusuusta wananka ama isticmaalka haamaha si looga fogaado dhibaatooyinka amniga. Iyada oo ay waxaas oo dhami jiraan, Brave si fiican looma soo dhaweynin, sidaa darteed Brandan Eich iyo kooxdiisii ​​cusbayd waxay go’aansadeen inay diiradda saaraan dhibaatada xayeysiinta, iyagoo gaadhay xalka aadka u xiisaha badan: xannibaadda xayeysiiska dhinac saddexaad sida kuwa Google ama shirkadaha kale laakiin isweydaarsiga , abuureyaasha iyo kuwa nolol ka sameeya xayeysiinta, waxay bixiyaan nidaam xayeysiis beddel ah oo aan duullaan ahayn adeegsadaha ugu dambeeya, sidan ayaa ah Abaalmarinno Geesi ah ayaa dhashay qalab si tartiib tartiib ah u helaya taageerayaal badan oo ka dhigaya kuwa isticmaala Chrome ama Firefox inay u beddelaan biraawsarkooda Brave.
1 Waa maxay Bats?
4 Wax ku biirin otomaatig ah
5 Bixinta bilaha
7 Qodobbo wareersan oo ku saabsan Abaalmarinta Geesinimada
8 Fikrad ka dib wax ka badan hal bil oo la isticmaalo
Waa maxay Bats?
BAT waxay u taagan tahay Token Attention Basin, ama Token Attention Basin. Waa calaamadda tikniyoolajiyadda ethereum kaas oo adeegsada teknolojiyaddeeda si ay ugu adeegto xayeysiiska si qarsoodi ah isla markaana u siiso adeegsadaha ama xayeysiiyaha dulsaarka.
Waxay u egtahay wax qariib ah, aniga shaqsiyan waxay u muuqatay wax lala yaabo markii ugu horeysay ee lagu dhawaaqay Brave, laakiin markii aad bilowdo isticmaalkeeda arrimuhu way cadaanayaan oo caadi ayey noqonayaan.
Waqtigan xaadirka ah, haddii aan daalacno degel leh nidaam xayeysiis ama xayeysiis ah, kumbuyuutarkayagu wuxuu soo saaraa cookies oo halkaas ku haray oo waxaa isticmaali kara degel kasta ama nidaamka xayeysiiska Mahadsanid BAT, ogeysiisyada waa la xareeyay oo ha u oggolaan ama soo dirin ama ha u helin macluumaad, markaa isticmaaluhu wuu badbaado oo looma isticmaali karo degel kale ama xayeysiiyaha. Intaas waxaa sii dheer, nidaamku wuxuu abuuraa xayeysiis aan dhib lahayn oo loo adeegsan karo isticmaalaha ama maahan. Abaalmarinta geesinimada leh iyo BAT-yada ayaa xor u ah inay doortaan, isticmaaluhu wuxuu go'aansan karaa wakhti kasta inuu joojiyo, ma isticmaali karo ama ma isticmaali karo.
Marka laga hadlayo xayeysiiyaha, iyadoo la adeegsanayo nidaamyo dhaqameed, xayeysiiyuhu isla sidaas ayuu ku bixiyay haddii adeegsadaha uu arko xayeysiiskiisa ama haddii uusan arkin. Hadda, mahadsanid isticmaalka astaantan ethereum, xayeysiiyaha kaliya ayaa bixiya xayeysiinta gaareysa isticmaaleha, oo leh kharash yar, maxaa yeelay waxaad dhab ahaantii bixineysaa "fiiro gaar ah" mana ahan baahinta xayeysiinta.
Waxaas oo dhan, isticmaaleyaal badan ayaa kugula talinaya Geesi, maadaama ay tahay beddel ixtiraamaya asturnaanta isticmaalaha ugu dambeeya tanna macnaheedu maahan inay tahay inuu xayeysiiyuhu baaba'o.
Si aad u hesho BAT ama aad u isticmaasho barnaamijka Abaalmarinta Geesinimada, waa inaan marka hore rakibaa biraawsarka webka. Waxaan ku heli karnaa BAT-ka, sidaan soo sheegnay, anagoo ku iibsanayna lacag dhab ah ama adeegsanay biraawsarka internetka.
Brave waa biraawsar shabakad iskutallaab ah, oo hadda loogu talagalay Windows, macOS iyo Gnu / Linux.
Dunida Gnu / Linux dhexdeeda, Brave wuxuu u joogaa qaab dhismeedka 64-bit ( Yaan wali garanaynin naqshada ay leedahay?). Sida barnaamijyo kale oo badan, Geesinimo ayaa lagu rakibi karaa iyadoo la adeegsanayo keydadka iyo boosteejada. In kasta oo ay sidoo kale jirto nooc ku jira qaab SNAP. Kooxda geesinimada leh waxay kugula talineysaa sameynta rakibida ugu horeysa maadaama ay cusbooneysiineyso wax ka badan qaabka snap-ka. Jira hage rakibo oo aad u faahfaahsan waxaana sharxay mid kasta oo ka mid ah qaybinta ugu caansan ee jirta.
Waa hagaag. Waxaan horeyba u ognahay waxa ay yihiin 'BAT's' (waanu arki doonaa badanaa markaad gasho goobaha geesinimada), waxaan horey u ogaanay sida loogu rakibo biraawsarka kumbuyuutarkayaga. Oo hadda taas?
Kadib rakibida iyo furitaanka Brave, saaxir rakibayaal ayaa soo muuqan doona kaas oo naga caawin doona talaabo talaabo ah si aan u qaabeyno shabakadeena shabakada. Waxay ku qoran tahay Isbaanish waxayna wax walba ugu sharaxaysaa qaab fudud. Iyo mid ka mid ah talaabooyinkaas waxay ka kooban tahay firfircoonaan ama aan ahayn "Abaalmarinno Geesinimo leh". Waanu kicin karnaa hadda ama goor dambe ayaan samayn karnaa, Brave ayaa ku siinaya xorriyaddaas.
Haddii aadan dhaqaajin oo aad hadhow sameyso, si aad sidaas u yeelatid waa inaan tagnaa "Settings" oo ku yaal menu-ka biraawsarka ama si toos ah liiska "Abaalmarinta Geesinimada leh", labaduba waxay ku geynayaan meel isku mid ah, daaqaddan:
Daaqaddan waxaan ka helaynaa dhammaan dejinta Abaalmarinta Geesinimada laba tiir. Tiirka ku yaal dhinaca midigta waxaan ka helaynaa guddi ama sanduuq ay ku jiraan dhammaan astaamaha BAT ee aad ku guuleysatay, waxaad awoodday inaad iibsato, waxaad awoodday inaad qaybiso oo aad gasho Taageer, jeebka loo yaqaan 'cryptocurrency' oo uu Brave ugu shaqeeyo asal ahaan taasina waxay keydisaa BAT-keena.
Dhibaatada ama dib u dhaca aan ku arko boorsadan ayaa ah taas Ma awoodi doontid inaad xaqiijiso illaa ay ka gaarto 25 BATIn kasta oo haddii aynaan degdegin, haddana ma aha dhibaato aad u daran sidoo kale. UpHold waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dhaafto xisaabaadka koontooyinka kale ama boorsooyinka, marka markaan xisaabta xaqiijino oo aan dooneyno inaan la shaqeyno BAT boorsooyinka kale ee taageera, waxaan wareejineynaa BAT waana intaas.
Tiirka bidixdeena waxaan ku leenahay shan sanduuq ama baloogyo mid lagu dul diyaarshay midka kale, baloogyadu waa: Koodhka macruufka Abaalmarinta, Xayeysiiska, Kordhinta otomaatiga ah, tabarucaadka billaha ah, iyo talooyinka.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah Xayeysiiska tan iyo badhanka badhanka leh ee leh, waxaad dhaqaajineysaa ama joojineysaa barnaamijka Abaalmarinta Geesinimada.
Inta udhaxeysa badhanka badhanka iyo cinwaanka baakada waxaa jira badhanka qaabeynta oo noo ogolaanaya nidaamka u sheeg inta xayeysiis ee aan dooneyno saacaddiiba.
Waxaan haynaa fargeeto ah 1 xayeysiis iyo 5 xayeysiis saacaddii. Sida iska cad, hadaan rabno 0 xayeysiis, ma dooneyno nidaamka oo hadaan rabno in ka badan 5 xayeysiis saacadiiba, nidaamku wuxuu noqdaa mid dhibsada marin haynta waxna u tareyso isticmaalaha dhamaadka Markaanu calaamadinay tirada xayeysiiska ee aan rabno, waxaan tagnaa salka hoose ee dhismaha waana arki doonaa markii BAT-yada loo wareejiyo jeebkayaga, Immisa BAT ah oo aan kasbannay iyo imisa ogeysiis oo na soo gaadhay bishii ugu dambaysay, oo ay ku jiraan taariikhda ogeysiisyada la helay 7dii maalmood ee la soo dhaafay.
Tani waa xayndaab aad u xiiso badan oo aan shaqsiyan u isticmaalo inta ugu badan maxaa yeelay waxay i siineysaa aragti guud ee nidaamka aniga oo jaleecaya.
Wax ku biirin otomaatig ah
Wax ku biirinta otomaatigga ah ayaa ah xayndaab ka hooseeya Xayeysiinta taas oo noo oggolaaneysa inaan noqonno kumanaan abuurayaal diiwaangashan. Nidaamku waa sahlan yahay: waxaan ku calaamadeyneynaa qaddarka BAT bishiiba gurigan. Waa inaanu leenahay qadarka BAT maadaama aysan deyn ku lahayn. Marka la calaamadeeyo, waxaan uga tagnaa iyada oo shaqeyneysa oo aan internetka ku marinno geesinimo. Dhamaadka bisha, Kuwan BAT-ka ah waxaa loo qaybin doonaa abuurayaashii booqday iyadoo lagu saleynayo booqashooyinka aan sameyno, dareenka la siiyay.
Qeybta, ilaalinta ruuxa biraawsarka, wuxuu tilmaamayaa abuureyaasha diiwaangashan ee aan ugu deeqnay intaas oo BAT ah iyo dareenka aan siiney tiradaas. Abuuraha waa in la diiwaangeliyo barnaamijka laakiin ma ogaan doonno wax xog ah, marka laga reebo isticmaalaha ay iska diiwaangeliyeen ama ay naga heleen marka laga reebo inaan nahay isticmaale ku deeqay iyaga.
Brave wuxuu ujeedkiisu yahay inuu isku daro qarsoodiga isticmaalaha iyo dakhliga xayeysiinta, waana sababtaas sababta dhismahan, oo ka hooseeya xaddiga otomatiga ee otomaatiga ah, uu yahay mid xiiso badan oo muhiim ah Xannibaadda tabarucaadka billaha ah waxay noo oggolaaneysaa inaan dooranno abuuraha ama degel diiwaangashan, dhammaan kuwa aan booqannay oo diiwaangashan iyo ku deeqo ama bixi bil kasta qaddarka BAT oo ah nooc ka mid ah lacag uruurinta gudahood miisaaniyada aan ku calaamadinay block hore. Nidaamkani wuxuu adeegsadaa oo keliya BAT-yada aan ku leenahay koontada oo otomaatig ugu sameeya sidan oo kale haddii aan rabno abuuraha ka kooban YouTube-ka inuu helo bille ah 20 BAT ama boqolkiiba dhammaan deeqaha billaha ah ee aan ku bixinno iyada oo loo marayo block-ka-bixinta otomaatiga ah.
Baloogyadii hore waxaan ugu qoondeyn karnaa qaddar abuureyaasha, baloog kale waxaan ku tilmaami karnaa wax kasta oo aan siino cidda aan siino badan iyo kan aan siino wax yar iyo qeybta ugu sarreysa waxaan ugu deeqi karnaa qaddarka aan dooneyno si toos ah abuure. Waan ku xakamayn karnaa gurigan oo abuuraha ayaa heli doona intaas oo BAT ah bil kasta haddii aan intaas leenahay, haddii aanan haysan, deeqda lama sameyn.
Laakiin si xiiso leh, shaqadan looma qorsheynin dhismahan laakiin waxay ka timid astaanta BAT ee aan ku hayno barta cinwaanka. Gurigan waxaan kaliya ka haynaa macluumaad caalami ah oo ku saabsan talooyinka aan bixinnay. Waxaan sidoo kale awood u yeelan karnaa nooca abuure ee aan dooneyno inaan aragno, sidaas darteed, marka lagu daro degel diiwaangashan, waxaan ka dhigi karnaa astaanta caarada inay ka muuqato Twitter, Github iyo Reddit.
Waxaan dooran karnaa abuuraha aan dooneyno inaan ku tabarucno oo adigoo riixaya astaanta BAT daaqadda soo socota ayaa u muuqata:
Waxaan dooranaynaa caarada, waxaan gujineynaa "Talo dir" badhanka abuuraha wuxuu ku helayaa BAT dhamaadka bisha xisaabtiisa.
Qodobbo wareersan oo ku saabsan Abaalmarinta Geesinimada
Waqtigan xaadirka ah, waxaan arki karnaa in hawlgalku fudud yahay, laakiin mararka qaarkood waxaa jira waxyaabo ina wareeri kara.
Mid ka mid ah waxyaabahaas, aniga xitaa dhibbane ayaan u ahaa, waa jahwareerka nidaamka xayeysiiska dhaqameed ee leh xayeysiisyada Abaalmarinta Brave.
Hal shay waa xayiraadaha xayeysiiska, oo u shaqeeya sida Adblock ama DuckDuckGo Muhiimadda gaarka loo leeyahay iyo wax kale waa Abaalmarin Geesinimo ah, adeegsiga midna macnaheedu ma aha hawlgelinta ama ka hakinta kan kale. Taasi waa, haddii aan isticmaalo xayeysiiyaha xayeysiinta waxaan isticmaali karaa Abaalmarinta Geesinimada maxaa yeelay waxay isticmaashaa qaab ka duwan oo loogu adeego xayeysiisyada iyo haddii aan dooneyno inaan adeegsanno Abaalmarinno Gees ah macnaheedu maahan inaan u dulqaadanno xayeysiiska iyo baakadaha bogagga qaarkood. waana inay damiyaan xayeysiiska xayeysiinta iyo trackers. Waa waxyaabo kala duwan oo ay tahay in la muujiyo.
BAT-yada waa astaamo ethereum oo leh qiime qaraabo ahTaasi waa, waxaan hadda ku iibsan karnaa BAT 1 doollar oo aan ugu deeqi karnaa 5 BAT, annagoo rumaysan inaan siinno 5 doollar, laakiin dhammaadka bisha, taasi waxay noqon kartaa qiimaheedu kala bar ama saddex laab. Xaaladda beddelka qiimaha, waxay naga qaadi doonaan oo keliya waqtiga aan iibsaneyno, laakiin abuuraha ayaa heli doona BAT laakiin markay taas u beddelaan lacagta dhabta ah, waxay kaliya ka qaadi doonaan qiimaha kuwa BAT-da xilligaas. Waxay noqon kartaa wax iska cad wixii aan idhi, laakiin waxaa jira dad badan oo abuurayaal nuxur leh oo aan wali garanaynin sida loo shaqeeyo crypto iyo kuwa isqoriya maxaa yeelay waxay leeyihiin ilo dakhli oo badan, laakiin ma garanayaan nidaamka iyo waxa loo adeegsado cryptocurrencies.
Ugu dambeyntii, waxaa jira barta boorsooyinka iyo Taageerada. BAT-yada waxaa kaliya oo loo wareejiyaa UpHold halkaasna waxaa looga wareejiyaa jeebka aan dooneyno. Laakiin Geesi wuxuu leeyahay qayb la yiraahdo "Crypto Wallets" waa qaybta maareynta boorsada ee Brave ay ku dartay si aan ugu maamuli karno boorsooyinkeena shabakada internetka., sida shaqada shahaadada dhijitaalka ah, laakiin kuma xirna BAT-da illaa aan ka xirno hal boorso midka kale. Waa muhiim maxaa yeelay haddii aan rabno ma isticmaali karno qaybta 'Crypto Wallet' waxaanan isticmaali karnaa Abaalmarinta Geesinimada.
Fikrad ka dib wax ka badan hal bil oo la isticmaalo
Waan ka daalay howlaha geedi socodka ee Chrome iyo Edge, culeyska Firefox, iyo arimaha Chromium, waxaan go aansaday inaan aado geesinimo runtiina waan jeclahay. Kaliya maahan iswaafajin iyo adeegsi laakiin sidoo kale waxyaabaha sida Abaalmarinta Geesinimada leh. Waxay ila tahay aniga nidaam aad u xiiso badan oo xayeysiis ah. Laakiin nidaam si aad u liidata u sharraxay abuurayaasha Brave.
Adduunyada oo ku-soo-biirayaasha iyo ku-soo-biirayaashu ay noqonayaan ikhtiyaar weyn oo dhaqaale ahaan loogu taageero abuurayaasha maaddooyinka, aaladaha sida Brave iyo Abaalmarinta Geesinimadu waa dhiirrigelin weyn iyo hab lagu bixiyo waxyaabaha ku jira lacagteenna ama xogteenna, laakiin innaga oo og khatarta iyo maxaa waxaas oo dhami ka kooban yihiin.
Waan sii wadi doonaa adeegsiga biraawsarkan maxaa yeelay waan jeclahay falsafadiisa iyo sida ay u shaqeyso. Adiguna, ma geesi baa tahay oo isku dayi doontaa? Maxaad u maleyneysaa adeegsigaan xannibaadda? Miyaad horeba u haysatay BAT?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Abaalmarinno Geesinimo leh ama sida loo galo adduunka ee cryptocurrencies adigoon qatar gelin lacagtaada
Weli si fiican uma fahmin makaanikada arrintan... i sax haddii aan qaldanahay, laakiin waxa aan arko... waa in ay lacag ii dhiibaan si aan u bixiyo kuwa kale, ka dibna waxaan qabaa...maxay sameeyaan. Waxaan ka faa'iiday this?